လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း (၂၀၀၉) - Your Brain On Porn
J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး။ 2009 Aug;45(2):156-62. doi: 10.1016/j.jadohealth.2008.12.004.
Braun-Courville DK, Rojas က M.
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆေးပညာ, ဆေးပညာသိနာတောင်ပေါ်ကျောင်း, နယူးယောက်, နယူးယောက်, ယူအက်စ်အေ၏ဌာနခွဲ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
လူငယ်မီဒီယာများတွင်မီဒီယာသည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည် ကျယ်ပြန့်သောသဘာဝနှင့်သုံးစွဲနိုင်မှုအရအင်တာနက်သည်ဤပညာရေး၏ရှေ့တန်းမှနေရာတွင်ရှိနေနိုင်သည်။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်အင်တာနက်၏သက်ရောက်မှုပမာဏကိုမူမသိရှိရသေးပါ။
433 မြီးကောင်ပေါက်များ၏စုစုပေါင်းနယူးယောက်စီးတီးရှိကနျြးမာရေးစင်တာမှာအမည်မသိစစ်တမ်းပြီးစီးခဲ့သည်။ အဆိုပါ Cross-Section စစ်တမ်းကအင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များ (SEWs) မှထိတွေ့မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်လိင်အလိုလိုသဘောထားတွေအကဲဖြတ်။
သင်တန်းသားများကို၏, 96% အင်တာနက်ခဲ့ခြင်းနှင့် 55.4% အစဉ်အဆက်တစ်ချုပ်လာရောက်လည်ပတ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Logistic ဆုတ်ယုတ် CI =, SEWs ထိတွေ့မြီးကောင်ပေါက်ကနောက်ဆုံး 1.8 လ (OR = 1.2 အတွက်တစ်ဦးထက်ပိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ခဲ့ကြမျိုးစုံတစ်သက်တာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက် (OR = 2.9, CI = 3, 1.8), ရှိသည်ဖို့ပိုများပါတယ်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး 1.1, 3.1), နောက်ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံ (OR = 2.8, CI = 1.5, 5.2) မှာအသုံးပြုသောအရက်သို့မဟုတ်အခြားတ္ထုများရှိသည်ဖို့နှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံ (OR = 2.0, CI = 1.2, 3.4) တွင်စေ့စပ်ရန်။ တစ်ဦးကSEWs သို့သွားသော dolescents သည်တစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ခွင့်ပြုချက်ရမှတ်များပြသသည် (2.3 vs. 1.9, p
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းထိတွေ့ထိုကဲ့သို့သောမိတ်ဖက်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအရေအတွက်အဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးများအတွက်အလားအလာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ SEWs အနေနဲ့ပညာရေးရည်ရွယ်ချက်အစေခံများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စားသုံးမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးမှုများအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ longitudinal သုတေသန SEWs ထိတွေ့လူငယ်သဘောထားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဘယ်လိုအကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
ဤသုံးသပ်ချက်မှမှတ်ချက်များ - ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2012)
Braun-Courville နှင့် Rojas '' 2009 မြီးကောင်ပေါက်များ၏ (433) လေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိုသုံးပါသောသူတို့အားဤကဲ့သို့သောစအိုလိင်ဆက်ဆံ, မျိုးစုံမိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အရက်ကိုအသုံးပြုပြီးအဖြစ်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ ဒီလေ့လာမှုကအလားအလာအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များအပေါ်ပညာရေး၏မရှိခြင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအတွက်မြင့်မားတဲ့စွန့်စားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကိုသက်သေခံသောသူအမြီးကောင်ပေါက်, high- အချို့ form မှာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းညွှန်ပြသူကိုဘရောင်း, Keller နှင့် Stern ပာ (2009) ကထောက်ခံခဲ့သည် အန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသူတို့ကိုယ်သူတို့။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, United States မှာ, Braun-Courville နှင့် Rojas (2009) ပိုပြီးမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းထိတွေ့နေသောဆယ်ကျော်သက်ပေါ့ပေါ့လိင်၏အယူအဆကိုလက်မခံဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းအပြုသဘောဆောင်။